Resorts Resorts na -achọ ime ka nne na nna gị bụrụ TikTok Star ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Resorts Resorts na -achọ ime ka nne na nna gị bụrụ TikTok Star ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Technology • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Resorts Resorts na-ebuputa mmemme GrandEscapes ọhụrụ ahaziri maka ezumike nne na nna ochie mgbe ezumike gachara.
ResortsBeaches® Resorts, ụlọ oriri na ọ leadingụ familyụ na-atọ ụtọ ezinụlọ niile, na-ekwupụta ọkwa ọhụrụ ha iji nyere aka mepụta "granfluencer" ọzọ na TikTok.
Ebe ezumike ezinụlọ a na -enye ezumike ezumike na nkuzi "Granfluencer" na TikTok ma na -eme ememme njem GrandEscapes ọhụrụ.
Resorts Resorts chọrọ imepụta nne na nna ochie na ụmụ ụmụ nne ha n'ịntanetị, wee kpọkọta ndị ezinụlọ agbatịkwuru.
Ezubere GrandEscapes kachasị maka ezumike nne na nna ochie na paradaịs mgbe ọtụtụ oge gachara.
Otu nne na nna ochie nwere ihu ọma ga -emeri nkuzi TikTok site na otu n'ime ndị ama ama ama ama n'elu ikpo okwu, @ourfilipinograndma, ebe ha ga -amụta ihe ọ ga -ewe iji mee TikTok gaa nje wee banye 'Maka Gị Peeji' n'oge ha na -eme njem na Beach Resort.
Ugbu a ruo na Nọvemba 11, 2021, ndị ezinaụlọ nwere ike biputere vidiyo TikTok nke nne na nna ha ochie maka ohere iji merie nkuzi TikTok na ezumike nrọ abalị abalị ọ bụla. Ebe ezumike osimiri na ndị Turks & Caicos or Jamaica. Ịbanye n'ụsọ osimiri GrandEscapes nchịkọta, ndị okike ga -eso ma kpado @BeachesResorts na TikTok ma tinye hashtag #BeachesGrandEscapes na vidiyo vidiyo nke nne na nna ha ochie na -agba egwu, na -abụ abụ ma ọ bụ na -amali elu na usoro ọhụrụ.
Ọ bụghị naanị na Resorts Resorts chọrọ ịmepụta ihe ọchị maka ndị nne na nna ochie na ụmụ nna nna ha n'ịntanetị, mana ijikọ ezinụlọ agbatịkwuru na mmadụ nọ n'isi ndepụta ahụ. Na mgbakwunye na ohere iji merie ezumike nrọ site na TikTok, ụlọ ọrụ ezumike na -ewebata Oké osimiri ukwu, emebere nke ọma maka ezumike nne na nna ochie na ụmụ nne na nna ochie na paradaịs mgbe ọtụtụ oge gachara. Oke osimiri GrandEscape dị mma n'oge ọ bụla n'afọ, mana maka obere oge, enwere ihe mkpali pụrụ iche maka idobe abalị ise ma ọ bụ karịa, nke emere ugbu a site na Jenụwarị 9, 2022, maka njem ọdịda 2022. Ndoputa n'oge ahụ ga -enweta ihe pụrụ iche “ Emere maka ncheta ”foto ezinụlọ na nhọrọ nke nri ụtụtụ Sesame Street Character maka nri nwata, Red Lane.® Manicure spa maka mmadụ abụọ, ma ọ bụ “Kitty Katt” Catamaran Cruise maka abụọ nke ezinụlọ niile nwere ike sonyere wee nwee ọ.
“Na osimiri, oge ezinụlọ bụ ihe niile. Anyị na -amata afọ siri ike ọ dịrịla, ọkachasị maka ọtụtụ nne na nna ochie ndị n'oge na -adịbeghị anya anaghị ahụkarị ụmụ ụmụ ha ugboro ugboro ma ọ bụ, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ dịghị ma ọlị. Anyị chọrọ ka ezinụlọ mechie oge ndị ahụ furu efu, yana kedu ihe ga -aka mma ime nke ahụ karịa Caribbean anyị mara mma, "Joel Ryan, onye isi ihe nkiri ntụrụndụ na Resorts Beach kwuru. "Ebumnuche anyị bụ ka ezinụlọ mepụta ncheta na -adịgide adịgide ọnụ, na n'ihi na ebe ntụrụndụ anyị nwere ihe maka onye ọ bụla, GrandEscapes anyị bụ ụzọ doro anya iji mee ka Nna nna ukwu laghachi azụ."
Ụsọ osimiri bụ ebe ezumike ikpeazụ maka ndị nne na nna ochie na ụmụ ụmụ nne ka ha gaa n'ihu na -ejikọ ọnụ, na -etinye ọchị na ịdị n'otu oge ọ bụla, maka afọ niile. Ụmụaka nwere ike ịnụ ụtọ osimiri na Ogige Mmiri Pirates Island n'ehihie, ma gaa na Xbox® Ụlọ ezumike ma ọ bụ osimiri 'na -atọ ụtọ ụlọ egwuregwu n'abalị. Ụmụaka kacha nta nwere ike soro ndị ọkacha mmasị ha kere òkè na mmemme Street Sesame®ndị na -agụ akụkọ ma soro ndị enyi ha iwe ọkụ na -enwe ntụrụndụ ehihie na abalị. Ihe omume ndị ọzọ a na -ahọrọ gụnyere usoro ịgba mmiri nke nwa ahụ nwere Scuba Divers a zụrụ azụ na nkuzi klọb klọb golf nke obere. njem pụrụ iche, nke na-agụnye ihe niile dị mma maka onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ.
Iji banye GrandEscapes Sweepstakes, gaa beaches.com/beachesgrandescapessweepstakes. Ịde akwụkwọ nleta mkpali ezumike nke GrandEscapes osimiri.com. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ezumike okomoko Include® na osimiri, gaa osimiri.com.
Resorts nke osimiri:
N'inwe ebe atọ dị egwu na Turks & Caicos na Jamaica, yana ebe nke anọ na -abịa St. Vincent & the Grenadines, Resorts Beaches® bụ ụzọ mgbapụ kachasị maka onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ. Resorts Resorts na -enye ọmarịcha mma karịa ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ na -eme njem na mbara ala nwere nnukwu ọwa mmiri, ụlọ ezumike XBOX®, ogige ụmụaka pụrụ iche, ụlọ oriri na nkwari abalị nke ndị ntorobịa, Nannies agbaara agba, ọrụ Butler, Red Lane® Spas, Ụlọ ọrụ Aqua nwere asambodo na ọzụzụ PADI® ọkachamara. , na Wi-Fi n'efu. Dịka onye nkwado dị mpako nke Sesame Street, Resorts Resorts na -enyekwa Sesame Street® Caribbean Adventures, ebe ụmụaka nwere ike soro ndị enyi ha kachasị amasị ha pụọ ​​na ndị otu Sesame Street na -eme ihe kwa ụbọchị na ihe ngosi kwa izu. Resorts Resorts bụ ebe zuru oke maka nnọkọ ezinụlọ site na nnọkọ na ụbọchị ọmụmụ pụrụ iche ruo mmemme mmemme agbamakwụkwọ bịanyere aka n'akwụkwọ, agbamakwụkwọ a na -eme omenala. Resorts nke osimiri na -ekwe ndị ọbịa nkwa udo nke uche site na mbata ruo ọpụpụ ya na Protocols of Cleanness nke Beaches Platinum, usoro ahụike na nchekwa nke ụlọ ọrụ ahụ emebere nke ọma iji nye ndị ọbịa obi ike kachasị mgbe ha na -eme njem na Caribbean. Resorts Beach bụ akụkụ nke Sandals Resorts International (SRI) nke ezinụlọ, nke mbubreyo Gordon “Butch” Stewart hiwere, nke gụnyere Luxury Include® Sandals Resorts, ma bụrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ebe niile na Caribbean. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ebe ezumike osimiri, gaa osimiri.com.
Ndị ụgbọ elu Southwest: Anyị ga -emebi mmachibido iwu Texas na ikike ịgba ọgwụ mgbochi